Filtrer les éléments par date : samedi, 13 novembre 2021
samedi, 13 novembre 2021 19:49
Zava-mahadomelina : Rongony maherin'ny 5 taonina nodorana tao Ambanja
Rongony milanja 5 taonina sy 100 kg ary menaka jamala 3,5 litatra no tratra, ary nodorana tao Ambanja omaly 12 novambra.
Vokatra azo tamin’ny « opération » nataon'ny Zandary nanomboka ny 12 oktobra hatramin'ny 2 novambra tany Agnalabe izy ity.
Nisy rongony 200 kg hafa koa no efa nodorana tany an-toerana, talohan’izao.
Niatrika ny fandoroana ireto rongony ireto ny filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena faritanin’Antsiranana, ny Prefen’Antsiranana, ny komandin’ny Vondron-tobim-pileovan’ny Zandarimaria DIANA, ary ny solombavambahoaka sy manampahefana any an-toerana.
Very olomanga ny tontolon'ny mozika Malagasy. Nodimandry androany 13 Novambra 2021 teo amin'ny faha 87 taonany i Biry.
Mpamoronkira, mpihira ary anisany namorona ny tarika Railovy niaraka tamin'i Jérôme Randria, rahalahiny izy.
samedi, 13 novembre 2021 14:21
Vonjy aina : Nanavotra marary teny an-dalana Rtoa Radaloson Mamiarisoa, Goverinora Amoron’i Mania
Ramatoa iray marary "nidiran'ny tahona mangahazo ny masony, ka tapaka tao amin'ny masony ka tonga dia tsy mahita intsony" no hitan-dramatoa Radaloson Mamiarisoa, Goverinora Amoron’i Mania, teny an-dalana Antatao akaikin'ny Kaominina Fahizay Imady ny zoma alina, raha avy nidina ifotony tany amin'ny Kaominina Mahazoarivo sy Kaominina Sandrandahy Ambony izy sy ny mpiara-miasa aminy.
Noho ny hamehana sy vonjiaina, ny andro rahateo maizina, ny lalana mbola lavitra, izy efa tena marary sy tsy mahita intsony dia noentin-dramatoa Goverinora avy hatrany namonjy ny hopitaliben’Ambositra ilay ramatoa marary sy ny rainy.
Nanaraka tamin’ny moto ireo fianakavian’ny marary.
Efa mahazo fitsaboana sahaza azy ilay ramatoa. Noraisin'ny Faritra ihany koa ny fikarakaràna rehetra.
samedi, 13 novembre 2021 14:18
samedi, 13 novembre 2021 14:13
Tazomoka : Namono olona maherin’ny 450 teto Madagasikara hatramin'ny fiandohan'ny taona
Mbola loza mitatao amin’ny fiainan’ny Malagasy an-tapitrisany maro ny tazomoka, tsy mamela ny ankizy handeha an-tsekoly sy ny olon-dehibe hanatanteraka ny asany, ary sakana lehibe ho an’ny fampandrosoana.
Olona maherin’ny 450 no matin’ny tazomoka teto Madagasikara hatramin'ny fiandohan'ny taona.
Nanomboka ny hetsika famendrahana odimoka ny atin-trano mba hiadiana amin’ny tazomoka ny governemanta amerikana sy ny Fandaharanasa Nasionaly Miady amin’ny Tazomoka (PNLP) an’ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka, hiarovana mponina miisa 850 000 any amin’ny faritra Atsimo Andrefana sy Ihorombe.
samedi, 13 novembre 2021 14:12
Madagasikara vs Tanzania : Maimaimpoana ny fidirana fa ferana 20 000 ny mpijery
Hotanterahina etsy amin’ny Kianja Barea Mahamasina rahampitso Alahady 14 novambra 2021, ny lalao hifanandrinan’i Madagasikara sy Tanzania.
Lalao farany hatrehin’ny ekipa roa tonta ao amin’ny vondrona J misy azy, iadiana toerana hisolontena an’i Afrika amin’ny fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny baolina kitra, hatao any Qatar amin’ny taona ho avy io.
Maimaimpoana ny fidirana, araka ny fanambarana an-tsoratra nataon’ny Federasiona malagasy ny baolina kitra, tamin’ny alalan’ny filohany Rabekoto Arizaka Raoul, ho fanehoana ny firaisankiana, ary ihany koa ho fisaorana ny rehetra amin’ny fanohanana ny Barea.
Hisy araka izany ny tapakila fidirana ho zaraina eny amin’ny Jumbo Score Ankorondrano anio manomboka amin’ny 9 ora maraina.